को पुग्ला फाईनल ? इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
को पुग्ला फाईनल ? इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै
प्रकाशित मिति २७ असार २०७५, बुधबार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै छन् । रुसको लुजनिकी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १२ बजे सुरु हुनेछ । विजेता टोलीले उपाधिलागि फ्रान्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
इङ्ल्याण्डले सेमिफाईनलमा स्विडेनलाई २–० ले पराजित गरेको थियो । क्रोएसियाले आयोजक रुसलाई टाईब्रेकरमा हराउदै अन्तिम ४ को यात्रा तय गरेको थियो । निर्धारित समयको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाईब्रेकरबाट गरिएको थियो ।
क्रोएसियाले क्वार्टरफाईनलमा डेनमार्क र इङल्याण्डले कोलम्बियालाई स्तब्ध बनाएका थिए । दुवै टोली ठुला प्रतियोगितामा मात्र एक पटक भेटेका छन् । सन् २००४ मा भएको युरो कपको समुह चरणमा इङ्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ४–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
दुवै टोली यसअघि ८ पटक भिडेका छन् । जसमा चार पटक इङ्ल्याण्ड विजयी भएको छ । क्रोएसियाले २ खेल जितेको छ । दुई खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ ।
काठमाडौं मलमा ‘लेडी डन’को आतंक, व्यापारी र प्रहरीहरू आजित
काठमाडौं । द काठमाडौं मल व्यापार संघकी अध्यक्ष सुष्मा महराले आफ्नो पदीय दायित्व र हैसियत विपरितका गतिविधि गर्दा काठमाडौं…
गाँजासहित ५ जना पक्राउ
मकवानपुर — प्रहरीले गाँजा सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा–१५ रातोमाटे र राक्सिराङ गाउँपालिकाबाट प्रहरीले…
काठमाडौँ । प्रहरीले वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) र भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले…
पत्नी नभएका पुरुषहरूलाई भत्ता दिइने
इलाम । श्रीमानको मृत्यु भएपछि एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले व्यवस्था गरेको वर्षौं बित्यो । उस्तै अवस्थाका पुरुषले…
‘सामूहिक बलात्कार’ घटनामा प्रहरी गुपचुप, एसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन !
काठमाडौं । राजधानीको दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा ४ जनाको समूहले एक युवतीलाई गत…
हिरोइनहरुलाई मात खुवाउने सचिन तेन्दुलकरकी छोरी, इन्टरनेटमा भाइरल !
काठमाडाैं । भारतको भुतपूर्व क्रिकेटर तथा कप्तान सचिन तेन्दुलकर(सचिन विश्व क्रिकेटको इतिहासमा विश्वकै सर्वश्रेष्ठ ब्याट्सम्यानहरूमा गनिन्छन्)की छोरी सारा तेन्दुलकर…
‘मुख सम्हालेर बोल’
अदालतबाट तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएका दुई जना ३० वर्षपछि सिरहाबाट पक्राउ
प्रहरीकाे फरार सूचीमा गायिका आस्था, अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न अनुमति 22 views
बाह्रबिसे बजारमा निषेधाज्ञा जारी 19 views
ब्लु फिल्म खेलेर जमेका नेपाली युवतीहरू 11 views
साला फेसबुक !! 10 views
आजबाट मौसममा पूर्ण सुधार 10 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 8 views
रोकिएन विद्युत् चुहावट7views